Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/anana
Proverb 202 Aleo anana ampian-tsetsetra , toy izay matavy arahin-dromoromo . [Rinara 1974 #108]
Aleo sosoa ampian-tsetsetra , toy izay hena matavy ampian-dromoromo . [Cousins 1871 #110, Nicol 1935 #65]
Aleo sosoa ampian-tsetsetra , toy izay matsiro arahin-datsa . [Rinara 1974 #20]
Proverb 2477 Horirika amonosam-panasina , ka ny fonosina lo mbam-ponony . [Veyrières 1913 #4348]
Horirika amonosam-panasina (na: hena; na: anana): ny fonosin-do , ny mamono lo mbam-ponony . [Cousins 1871 #1102]
Horirika amonosam-panasina (na: hena; na: anana): ny fonosin-do , ny mamono lo rahateo. [Cousins 1871 #1102]
Horirika amonosana anana , ka ny fonosin-do , ny mamono lo. [Veyrières 1913 #4348]
Horirika namonosam-panasina : ny fonosin-do , ny mamono lo rahateo. [Rinara 1974]
Horirika namonosana anana , ka ho levona mbamin' ny fonosany . [Veyrières 1913 #4348]
Horirika namonosan-kena , ka miara-devona . [Veyrières 1913 #4348, Rajemisa 1985]
Horirika namonosan-kena : ny fonosin-do , ny mamono lo rahateo. [Houlder 1895 #1088]
Proverb 2767 Jiolahy homana anana ka homan-tsy fidiny. [Rinara 1974 #1564]
Proverb 2920 Kitoatoa vary amin’ anana: ao ny sendra hena, fa ny sendra sakay dia mirehoka . [Veyrières 1913 #2710, Cousins 1871 #1272, Houlder 1895]
Kitoatoa vary amin’ anana: ao ny sendra hena, fa ny sendra sakay dia misioka . [Cousins 1871 #1272]
Kitoatoa vary amin' anana : ao ny sendra hena , fa ny sendra sakay misiaka . [Veyrières 1913 #2710]
Kitoatoa vary amin' anana : ao ny sendra hena , fa ny tojo sakay dia mirehoka . [Rinara 1974 #1655]
Proverb 3597 Manao sotrobe lava tango : mahay atsy, mahay aroa. [Rajemisa 1985]
Sotrobe lava tango , ka mahay atsy mahay aroa. [Rinara 1974 #3956]
Sotrobe lava tango mahay atsy mahay aroana . [Veyrières 1913 #5039]
Sotrobe lava tango , sady fikapohana alika no fangaroana anana . [Abinal 1888]
Sotrobe lava tango : sady mahay atsy no mahay aroa. [Rajemisa 1985]
Sotroben -dRatsiavanga , ka sady fikapohana amboa no fangaroana anana . [Rinara 1974 #3958]
Sotroben -dRatsiavanga : sady fikapohana akoho no fangaroana anana. [Houlder 1895]
Sotroben -dRatsiavanga : sady fikapohana amboa no fangaroana anana. [Cousins 1871 #2947]
Proverb 3639 Manary andro toy ny lehilahy mitsongo anana . [Rajemisa 1985]
Mandany andro ohatra ny lehilahy mitsongo anana . [Rajemisa 1985]
Proverb 3785 Manidina am-paniriana toa anana . [Rinara 1974 #2107]
Proverb 3820 Manokana anana . [Veyrières 1913 #6567]
Proverb 4004 Mba ataovy toy ny anana lahy, ka raha maniry, tsongoy . [Houlder 1895]
Mba ataovy toy ny anana lahy ka raha maniry tsongoina . [Rinara 1974 #2219]
Mba ataovy toy ny anana lany: raha maniry tsongoina . [Cousins 1871 #1696]
Proverb 4061 Miangolangola mitenda fararano : ny vary tsy lany , ka anana indray no tadiavina . [Veyrières 1913 #2722, Cousins 1871 #1724]
Miangolangola toa tenda fararano : ny vary tsy lany , ka anana indray no tadiavina . [Veyrières 1913 #2722]
Proverb 4533 Mody adala, ohatra ny jiolahy homana anana. [Cousins 1871]
Proverb 4632 Mpiantsena mitsongo anana an-dalana : ny any an-tsaha aza hidinana , ka ny efa hita maso indray ve no havela ? [Rinara 1974]
Proverb 4821 Natao rapa-dango ny anana an-toriny , ka nitsongo anana an-kady no niafarana ! [Rinara 1974 #178]
Proverb 5384 Ny mpanompo toy ny voan' anana , ka raha kasihina poritra . [Rinara 1974 #3161]
Ny mpanompo voanana , ka raha kasihina poritra . [Houlder 1895 #1550]
Ny mpanompo voanana : raha kasihina , poritra . [Veyrières 1913 #586, Cousins 1871 #2356]
Proverb 5964 Rafotsibe manandrana anana : tsy milaza ny hafiny, fa ny masony mangarika ihany. [Veyrières 1913 #1899, Houlder 1895]
Rafotsibe manandran' anana , tsy milaza ny tsantsony na miteny ny hafiny fa maso mangarika ihany. [Rinara 1974]
Proverb 6112 Raha mpamosavy azo nanitsaka, ataovy toy ny anana, ka raha maniry, tsongoy . [Houlder 1895]
Raha mpamosavy azo nanitsaka, ataovy toy ny anana , ka raha maniry tsongoina . [Rinara 1974 #3626]
Proverb 6552 Sendrasendra vary amin' anana . [Veyrières 1913 #6154]
Torimasom- -bavy antitra : vita am-pitsongoananana ihany. [Cousins 1871]
Proverb 8016 Valin' ny anana hena , valin' ny hena anana . [Veyrières 1913 #894]
Proverb 8047 Vary amin' anana . [Veyrières 1913 #6158]